DOWNLOAD NETWORX LATEST VERSION - MMEMME NYOCHA - 2019
Ị chere na mmadụ na-eji kọmputa gị n'enweghị ikike? Maka ikpe dị otú ahụ, ị ​​nwere ike iji kamera weebụ ma gbaa onye a na-enweghị ihere. Ma maka ọrụ dị mfe na kamera weebụ, ịnwere ike iji mmemme pụrụ iche maka onyunyo vidiyo. Anyị ga-atụle otu n'ime ngwaọrụ ndị a - IP Viewer Viewer.
Onye na-elele igwefoto IP bụ usoro mmemme maka ịhazi onyunyo vidiyo iji kamera USB na IP. Na ya, ị nwere ike ịmepụta usoro onyunyo vidiyo na nkeji. Onye nyochaa igwefoto IP nwere ike ịrụ ọrụ na ọtụtụ ụdị, nke dị ihe dị ka 2000.
Na-agbakwụnye ese foto
Iji gbakwunye igwefoto vidiyo na elele anya igwefoto IP ị dị mkpa ka ịpị bọtịnụ Tinye Igwefoto. Ọ bụrụ na ịnwe igwefoto IP, mgbe ahụ, ịchọrọ ịchọta akara na ihe nlereanya na listi. Ịnwekwara ike ichedo ngwaọrụ ahụ na paswọọdụ ma ọ dịghị onye nwere ike iduzi onyunyo vidiyo na ya. Na igwe kamera, ihe niile dị mfe - usoro ihe omume ahụ ga-achọta ma hazie onwe ya.
Ọ bụrụ na agbadoro igwefoto gị, mgbe ahụ na Nyochaa igwefoto IP ị nwere ike igbanwe ya ogo 180 ma ọ bụ n'akụkụ ọ bụla ọzọ na ntọala.
Ịnwere ike ịhazi ihe oyiyi ahụ ga-eme ka mma ya dị mma. Dabere na ọkụ, ịnwere ike ịbawanye ma belata nchapụta, ọdịiche, saturation, nghọta, na ihe ndị ọzọ.
Dabere na ọnụ ọgụgụ nke ese foto, ị nwere ike ịhọrọ ịkekọrịta ihuenyo n'ime abụọ, atọ ma ọ bụ n'akụkụ anọ. Ma ọ bụ i nwere ike ịkekọrịta ya ma ọ bụrụ na ị nwere naanị otu ngwaọrụ.
Iji ọrụ PTZ Control, ị nwere ike ịbịgharịa na mpaghara ebe ahụ. Ka ịhọrọ ebe dị nso, naanị ị chọrọ ịdọrọ gburugburu gburugburu ebe a.
1. Ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ngwaọrụ akwadoro;
2. Ijikọta ese foto adịghị achọ nhazi oge;
3. Ihe omume ahụ na-ewe obere karịa 50 MB;
4. Njirimara enyi.
1. Enweghị Russian;
2. Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke igwefoto akwadoro - 4;
3. Ị pụghị ịdebe ihe nchekwa, naanị nyochaa na oge.
Onye na-elele igwefoto IP bụ usoro nlekọta vidiyo vidio na-adịghị mma. Enweghị ntọala ọzọ, interface na-enweghị ike - ihe niile onye ọrụ dị mfe chọrọ. Ọ bụ ezie na, n'adịghị ka Xeoma ma ọ bụ iSpy, ngwaahịa a amaghị otú e si edebe ihe ndekọ vidio, Nyochaa igwefoto IP dị mma maka ndị chọrọ ileba anya naanị n'oge.
Download Nyocha Igwefoto IP maka n'efu
PSD Viewer Onye na-ekiri ụwa Otu esi eji A360 Viewer Igwefoto weebụ
Onye nyochaa igwefoto IP bụ mmemme free maka ịmepụta usoro onyunyo vidiyo nke na-akwado ese foto USB na IP ...
System: Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008, XP, Vista
Onye Mmepụta: DeskShare